“Waxaan u mahadnaqayaa Shirkadda Dahabshiil oo gacan siisa ardayda reer Somaliland ee Malaysia” | Xarshinonline News
“Waxaan u mahadnaqayaa Shirkadda Dahabshiil oo gacan siisa ardayda reer Somaliland ee Malaysia”
Guddoomiyaha ururka ardayda Somaliland ee wax ka barta Malaysia
Hargeysa(NNN)- Guddoomiyaha ururka ardayda Somaliland ee wax ka barta Jaamacadda dalka Malaysia Mr. Shaafici Axmed Cali, ayaa faahfaahin ka bixiyay tirada ardayda reer Somaliland ee wax ka barta dalkaas.
Guddoomiyaha oo haatan socdaal ku jooga caasimadda Hargeysa oo u waramay Wargeyska Ogaal, waxa uu u mahadceliyay shirkadda Dahabshiil oo uu sheegay in ardayda reer Somaliland ee dalkaas ay gacan siiso, wuxuuna waraysigaas oo uu kaga hadlay tayada waxbarashada dalkaas uu u dhacay sidan;
S: Guddoomiye bal waxaad nooga waranta muddadii aad ku maqnayd jaamacada dalka Malaysia
J. Wallaahi imika waxaan ku maqnaa muddo laba sanno iyo sideed bilood ah. Markaa dalka Malaysia waxa jooga arday reer Somaliland oo gaadhaysa 1,800-2000. Gaar ahaan Jaamacadda dhiganayay hadaan kaaga waramo waxaa dhigta 92 arday oo ay 18 habloodna ku jiraan oo reer Somaliland ah, kuwaasoo kala dhigta qaybo kala duwan oo Jaamacada ka kooban min heer Degree, Master ilaa PhD. Nasiib wanaag sannadkan waxay Jaamacaddu aqbashay ardaygii ugu horeeyey ee PhD ee Somaliland ka yimaada, kaasoo waliba ahaa macalinkaygii dugsiga sare.
S: Adigu Kulliyada aad barataa waa noocma?
J: Kulliyadaydu waa Human Science.
S: Waxaad ka waranta tayada waxbarashada ee dalka Malaysia?
J : Wallaahi tayada waxbarashada Malaysia waxaa lagu tiriyada wadamada ugu waxbarashada wanaagsan. Imika waa wadan aad u hormaray, waa wadan aad u casriya, waa yurub oo kale ayaan odhan karaa, waana wadan aad waxbarashadiisu u sareyso.
S: Ardayda reer Somaliland miyay ku soo badanayaan waxbarashada dalka Malaysia?
J: Waxaan ku qiyaasi lahaa ardayda reer Somaliland 1800-2000, inkastoo ay imika joogan qoysas badan oo reer Somaliland oo ka yimid xaga Yurub oo ay soo degeen, iyagoo waxbarasho doonaya oo jecel inay wadan Muslim ah soo degaan, si ay wax ugu bartaan ubadkoodu.
S: Bal waxaad ka waranta waqtiyada aad munasibadaha qabtan hadaad tihiin ardayda reer Somaliland Malaysia ama ururkiina yaa idinka caawiya dhanka dhaqaalaha?
J: Waxaanu inta badan qabanaa 18-ka May. Waxa kale oo aanu qabanaa xafladaha ciidaha oo kale inaanu meel isugu keeno ardayda reer Somaliland, sidoo kalena waxaanu qabanaa markay arday dhamaysato waxbarashada inaanu u samayno xaflad sabootin ah oo aanu shahaado sharafyo ku gudoonsino, si ay u noqdaan oo ay dadku ku daydaan ardayda kale ee soo socota. Markaa dhaqaalaha ku baxa waxaa naga caawisa shirkadda Dahabshiil iyo shaqsiyaad kale, laakiin gacanta ugu weyn waxaa naga siisa shirkadda Dahabshiil, taasoo aan odhan karo waa shirkadda dadkeeda dal iyo dibadba heegan ugu ah inay caawiso, gaar ahaan ardayda, waliba siisay percentage gooni ah markay faa’ido ka hesho shacabka ay dib ugu celiso. Markaa waxaan halkan ugu mahadnaqayaa shirkadda Dahabshiil oo aad noola shaqaysa dalka iyo dibadba.
Filed under ganacsi, waxbarasho
← Imtixaanka Shahaadiga ah ee Dugsiyada Sare iyo Dhexe oo maalintii 2aad maraya iyo digniinta Guddida Imtixaanaadka Qaranka
Munaasibad Qado-sharaf ah oo Hoggaanka Kulmiye loogu sameeyay deegaanka Xaraf oo isukeentay Wejiyo aan la is-tusi jirin →